दौडिएर नयाँ मोडमा उभिएका अजित « Pahilo News
दौडिएर नयाँ मोडमा उभिएका अजित
प्रकाशित मिति : 8 April, 2019 11:17 pm
नेपालका ठूला व्यवसायीहरुले मासिक ६० हजार तलब दिन थालेपछि अजितकुमार यादवलाई आजभोलि आर्थिक चिन्ता खासै छैन । गोल्छा अर्गनाइजेसनका शेखर गोल्छा, नबिल बैंकका सिईओ शाह, जावलाखेल ग्रुपका राज शाह र अन्नपूर्ण ग्रुपका राजुविक्रम शाहले अजितकुमार यादवलाई मासिक ६० हजार तलब दिने सार्वजनिक कार्यक्रम नै गरेर घोषणा गरेका थिए ।
यसअघि, दुई नम्बर प्रदेश सरकारले एक मुष्ठ पाँच लाख दिने घोषणा गरिसकेको छ भने अन्य निकायबाट पनि सम्मान राशी पाइरहेका छन् । अजितलाई पनि केही समय यता अचम्म लाग्न थालेको छ । अजितकुमार दंग दिनचर्या बुझ्न भने उनको विगत एक पटक हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसपछि जो–कोहीले भन्न सक्छन्, दौडिएर जीन्दगी बदल्ने अजित स्याब्बास !
सत्र वर्षे ठिटो । त्रिभुवन विमानस्थलबाट हङकङका लागि विशाल विमानमा चढे । त्यति ठूलो विमान त अजितकुमार यादवले आकाशमा मात्रै देखेका थिए ।
तर, मनमा भने एकोहोरो पदक मात्रै थियो । अजितकुमारले भने– अहिले चाँही विमानको रहर लाग्न थालेको छ ।
हुनपनि अजितकुमार यादवले पहिलो पटक विमान चढेका थिए । त्यो पनि अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि । अजितकुमारका लागि उडान मात्रै होइन, अन्तरराष्ट्रिय खेल पनि पहिलो थियो ।
गम्भीर मुद्रामा अजित भन्छन्– पदक बिना देश फर्कनु प¥यो भने गुरूलाई के भन्ने ? अजितकुमार आकाशमा उडिरहेका थिए । तर, उनका पाइलाहरू अभ्यासमा दौडिरहेका थिए ।
हङकङ । अनि, त्यहाँको रंगशाला । कोही नेपाली देखेनन्, अजितकुमारले । बस्, अरु देशका खेलाडीहरु ।
कौतुहल नसकिदै खेलको समय शुरु भइहाल्यो । अजितकुमार ४५ देशका प्रतिश्पर्धीसँगै प्रतिश्पर्धामा उभिए । र, शुरू दौड । अजितका पाइला आफैं कुदिरहेका थिए । उनको मनमा भने गुरुका शब्दहरु गुञ्जिरह्यो । गुरुले भनेका शब्दहरुले खट्टालाई निर्देश दिइरह्यो ।
जब, तीन हजार मिटर पुरा हुनेबेला भयो । नजिकै थिए, भारतीय प्रतिश्पर्धी । तर, हत्तपत्त दोस्रो हुने अजितकुमारले भारतीय प्रतिश्पर्धीलाई ६ सेकेण्डले पछि पारे ।
तब पो, अजितकुमारलाई सवै कुरा सपनाजस्तो लाग्न थाल्यो । झोलाबाट नेपालका झण्डा निकाले । अनि बेकसुर एक्लै दौडिए, नेपालको झण्डा ओढेर ।
तेस्रो एसियन युथ एथ्लेटिक्स २०१९ मा अजितकुमारले स्वर्ण मात्रै जितेनन्, नेपालका लागि इतिहास पनि रचे । यो प्रतियोगितामा नेपालले अहिलेसम्म कास्य पदक मात्रै जितेको थियो ।
तर, सप्तरी राजविराजका अजितकुमार यादवले स्वर्ण नै जिते । जो, अव नेपालको इतिहासमा कसैले यो कीर्तिमान हटाउन सक्ने छैनन् ।
ललितपुरको लगनखेल बसेर कक्षा १२ मा व्यवस्थापन पढिरहेका अजितकुमारलाई खेल जितेपछि मात्रै यसको महत्व थाहा भयो । अजितकुमार भन्छन्– कक्षा–८ देखि नै सँधै पदक जित्दै आएको थियो । हरेक खेलमा भाग लिनु, पदक र पुरस्कारमा पाइने पैसा पाउनु अजितलाई अनौठो लाग्न छोडेको थियो ।
हङकङमा दौडिरहँदा पनि अजितले विशेष दबाव महशुस गरेका थिएनन् । मात्रै, गुरुको चिन्ता थियो अनि हरेक प्रतिश्पर्धाजस्तै गम्भीर बनेका थिए ।
भन्छन्– सशस्त्र प्रहरीको एउटा सिपाही तहमा जागिर खानु हुने बुवालाई खूशी दिलाउन पनि म हरेक खेलमा पदक जित्ने संकल्प गर्छु । हुनपनि, अजितकुमारले स्वर्ण नजितेको स्पर्धा हातका औला जति पनि छैन ।
स्वर्ण जितेपछि प्रदेश नम्बर दुई सरकारले पाँच लाख दिने निर्णय गरेको छ । तर, संघीय सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अजित भन्छन्– खेलमा भाग लिएपछि पुरस्कारमा पैसा पनि पाउँछु । यसैबाट अर्को खेलको तयारी गर्छु । मेरा लागि त सरकारले केही गरिदिएजस्तो लाग्दैन । तर, नेपालका हामी गोरखालीहरु ब्लिया छौं, सरकारले बातावरण बनाइदिए पुग्छ ।
अहिले अजितकुमारलाई बधाई दिनेको ओइरो लागेको छ । इनरुवामा रहेका बुवा पनि अजितलाई भेट्न काठमाडौं आएका छन् । तर, नेपालका लागि कीर्तिमान रचेर संसारलाई चिनाएका अजितकुमारलाई सिंहदरबारले भने देखेको छैन । जबकी, सिंहदरबारको पर्खाल बाहिरै अजितकुमार दौडिरहेको छ ।